घुमन्तेका तस्विरहरु | Hamro Patro
Suyog Dhakal - Mar 02 2017
प्रकृती, प्रवृती, प्रजाती, हिमाल, आकाश, संस्कार, आकार लगायत अन्य थुप्रै कुराहरु झल्किने तस्बिरहरुले नेपाल प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रदर्शनीले विश्वकै सुन्दर यो देशलार्इ एउटा सानो आँखिझ्यालबाट स्पष्ट अवलोकनको काम गर्यो, नेपाल पर्यटन बोर्ड धन्यवादको पात्र बन्यो ।
घुमफिर गर्न कसलाई मन नलाग्ला र! अझ आफ्नै स्वदेशका नदेखिएका सुन्दर ठाँउहरु घुम्न पाउनु र त्यहाँका तस्बिर खिचेर तस्बिरका माध्यमबाट सम्बन्धित स्थान, समाज र सभ्यताका बारेमा थाहा पाउन कसलाई मन नलाग्ला र ? घुमफिर गर्न निस्केका मान्छेहरुको क्यामराको लेन्समार्फत् खिचिएको तस्बिर भएकाले हामीले हाम्रो पात्रोमा यो समाचारकालागि शिर्षक जुरायाैं, 'घुमन्तेका तस्बिरहरू' ।
विभिन्न स्वदेशी अनि विदेशी पर्यटकहरुले नेपालका विभिन्न ठाँउमा खिचेका फोटाहरुलाई अनलाईनबाट छनाैट भएका प्रमुख ५० तस्बिरहरुलाई आज राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्राङ्गणमा प्रर्दशनीकालागि राखियो ।
ति उत्कृष्ट तस्बिरहरूबाट आज तस्बिरका सर्जक घुमन्तेहरुमध्येका उत्कृष्ट फोटो खिच्ने तिनजना फोटोग्राफरहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो । यसरी पुरस्कृत हुनेहरुमा प्रथम राजिव कपाली, दृतीय ﻿विजय गुरूङ्ग﻿ अनि तृतिय सब्रिना डङ्गोल रहेका छन् । विजयी तीनैजना लगायत घुमफिर तस्बिर श्रृंखलामा सहभागी सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरुलाई हार्दिक बधाई ।
हिमाल, पहाड अनि तराईका फोटाहरुमा नेपालीपन हेर्न सकिन्थ्यो । तस्बिरबाट नेपाल बोल्थ्यो, नेपाली बोल्थे । कुनै तस्बिरमा हिमाल हाँसीरहेको हुन्थ्यो त कुनै तस्बिरले प्रर्दशनी हेर्न अाउनेहरूलार्इ टक्क अडार्इराख्थ्यो । त्यस्तै तस्बिरमा रूखमा बसेका एक जोडी सङ्गीनी मयूर यति मनमोहक थियो जसमा धेरैको अाँखा हराइरहेको पाइयो ।
भन्नेलाई सुनको माला, पढ्नेलाई फूलको माला अनि खिच्नेलाई शब्दको माला ।